ရွေးကောက်ပွဲသင်ခန်းစာ ၊ NLD ရဲ့ ရှေ့မူဝါဒ နှင့် ဥပဒေထိရောက်ဖို့ . . . | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ရွေးကောက်ပွဲသင်ခန်းစာ ၊ NLD ရဲ့ ရှေ့မူဝါဒ နှင့် ဥပဒေထိရောက်ဖို့ . . .
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာမျိုးညွန့် နှင့် မဇ္စျိမကိုမျိုးသန့် တို့ တွေ႔ဆုံမေးမြန်းမှုမှာတော့ လတ်တလောကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ NLD ရဲ့ရှေ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း ၊အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆွေးနွေးမေးမြန်းထား တာကို တင်ပြ လိုက်ပါတယ် ။
အပိုင်း - ၁
မေး။ ။ ဆရာခင်ဗျား ၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲက ဘာတွေများ သင်ခန်းစာရတယ်လို့ ပြောလို့ရပါသလဲခင်ဗျား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲထက်စာရင် ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တော်တော်လေးကို ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးဖြင့် ကျွန်တော်တို့က ၂၀၁ရမှာဆိုရင် ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာ မရှိဘူး။ ၂၀၁၈ မှဖွဲ့တယ်။ ဖွဲ့ပြီးတော့ ကြားဖြတ်မဲဆန္ဒနယ်မှာရှိတဲ့ နယ်မြေတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ သုတေသနတွေဖွဲ့ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ရယ် စည်းရုံးမှုအခြေအနေ နယ်မြေခံအခြေအနေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာဆန်းစစ်မှု ကြိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တွေ့ရှိမှုအချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစည်းအဝေးကို ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေအလိုက် အဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့ အောင်နိုင်ရေးအတွက် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုချင်း အလိုက် လိုအပ်ချက်တွေ ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ တင်ပြပါ တယ်။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလကစတဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကို နယ်မြေ အသီးသီးမှ စတင်လုပ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီတော့ ထူးခြားတဲ့ ဒီ၂၀၁၈မှာ နောက်တစ်ခုပါလာတာက တော့ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်တွေ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေက တော်တော်လေးကို တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေက ကျွန်တော်တို့ door to door တစ်အိမ်တက်ဆင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးတာ၊ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းရှင်းလင်းပြခဲ့တာတွေ လုပ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကလည်း မဲရုံကိုယ်စားလှယ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ ငွေးကြေးပြုစုခြင်းဆိုင်ရာတွေမှာ အများကြီး ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေပြီး တော့ ထိုက်သင့်သလောက် လုပ်တဲ့ကြားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုက ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်တာထက်တော့ နည်းတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါဘာကြောင့်နည်းလဲ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ အချက်အလက်က အများကြီးအပေါ်မူတည်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါ။ အားလုံးခြုံပြောနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အမှန်အတိုင်းပဲ ဝန်ခံရရင် ပြည်သူတွေဟာ လက်ရှိနိုင်ငံရေး ၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အထူးဖြင့် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအရ ရရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေ။ နောက် စီးပွားရေး တုံ့ဆိုင်းနေတာတွေအတွက် မကြေနပ်မှုတွေက ဒီမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထင်ဟတ်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
မေး။ ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာ တည်ပြီးတော့ပေါ့နော် NLD ရဲ့မူဝါဒပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှေ့သွားမယ့် အခြေအနေပေါ့၊ သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ ၊ လတ်တလော လုပ်ဆောင်ဖို့ ဘာများရှိမလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့ ရေတိုရေရှည်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါတီတွင်းနဲ့ ပါတီပြင်ပတာဝန်တွေ ပေးထားတဲ့လူတွေ၊ ရေတိုအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပေးထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ပြည်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ လိုတယ်လို့ မဲဆန္ဒနယ်တော်တော်များများမှာတွေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အာဏာကိုကိုင်ဆွဲ သုံးစွဲနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပေးထားတဲ့လူတွေဟာ ဒီနေရာမှာ အဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်လို့ မကျေနပ်မှုတွေက ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပါတီတွင်းအရကလည်း ပါတီတွင်းမှာ ဖွဲ့စည်းမှုပိုင်းမှာ အားနည်းသွားတာ အမှန်တကယ်လည်းရှိပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်၊ ကျွန်တော်တို့စည်းရုံးရေးအားကောင်းတဲ့ အားကိုးရတဲ့ပါတီဝင် တစ်ထောင်နီးနီးဟာ လွတ်တော်နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ပါတီတွင်းမှာ ဘယ်လိုပဲ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပါစေ၊ ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့၊ အများယုံကြည်လောက်တဲ့ ပါတီဝင်တွေ အင်အားလျှော့နဲသွားပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေးမှာ တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နဂိုလက်ကျန်ပေါ့လေ ပါတီတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ နည်းပါးသွားတာတွေရှိတယ်။ နောက် အချင်းချင်းမှာလည်း ယုံကြည်မှု၊ ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုတွေကျတယ်၊ ယုံကြည်မှုနည်းလာတာ၊ ဒါတွေလည်း အများကြီးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ပါတီတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီးတော့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ခိုင်မာမှုရှိဖို့ ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ပိုများလာအောင်လုပ်ဖို့ လိုသလိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပေးထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း ရေတိုရေရှည် အမြင်နဲ့ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခု ကျွန်တော်တို့ သိသ၍က အများစုက ရေရှည်အရဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အစိုးရနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရကော ပြည်တွင်းက စီးပွားရေးပညာရှင်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက် အရကော မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ သို့သော် လတ်တလောအားဖြင့် ဒီ ခြိုးခြံချွေတာရေး လမ်းစဉ်ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ပြည်သူမကြိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ပါ။ အဲ့သလို လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးနေရတဲ့ အခိုက်မှာ ကျွန်တော်တို့က ဒါကို ပြည်သူလည်း အသက်ရှူပေါက် ချောင်စေမယ့် ရေတိုအားဖြင့် ပြည်သူကို အကျိုးပြုနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလဲ ပြန်လည်ထည့်သွင်းဖို့ လိုလာပြီလို့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုပဲ သုံးသပ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဥပမာ ၁၃ နေရာမှာ ၇ နေရာပဲ နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ လူထုထောက်ခံမှု ကျသွားတယ်လို့ သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် ။ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီအတွက်ကို ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်မလဲခင်ဗျား။
ဖြေ။ ။ ခုန ကျွန်တော် ပြောတဲ့အချက်ထဲမှာ ပါပါတယ်နော်၊ ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုများလာမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြည်သူတွေနားလည်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ရှင်းပြရမယ်။ စီးပွားရေးအရဆိုရင် ရှေ့ပိုင်းတုန်းက လုပ်ခဲ့တာတွေက တရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေများပါတယ်။ တကယ်တမ်း ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများပဲ ဖြစ်ရမှာပါ၊ အဲ့ဒီတော့ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ လုပ်ငန်းတော်တော်များများဟာ နားလည်မှု အပေးအယူနဲ့ပဲ လုပ်နေရတယ် ၊ ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ရတဲ့အခါမှာ အရင်စနစ်နဲ့ ကျင့်သားရနေတဲ့လူတွေ လိုက်နာခြင်းမရှိတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီစနစ်အပြောင်းအလဲကို သဘောမပေါက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရမှာ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ ဒီအပြောင်းအလဲ လုပ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးဟာ ဘယ်လောက်များလဲ ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ သဘောပေါက်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ရှင်းပြနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းတွေ ပြည်သူတွေကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ပြနိုင်ဖို့ ဒါတွေလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက် ကျွန်တော်ခုန ပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာ ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရူံးနိမ့်တဲ့ ၆ နေရာမှာ ၅ နေရာကအထူးအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် တိုင်းရင်းသားတွေက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပေးထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်အားမလိုအားမရဖြစ် တယ် လို့ ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခါမှာကျတော့ အစုအဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရှိဦးမယ်၊ တပ်မတော် ရှိဦးမယ်။ အဲ့ဒီတော့ အားလုံးရဲ့ သဘောတူညီမှုရှိမှ ကျွန်တော်တို့ အရှေ့ကိုရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မပျက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီချိန်အတွင်းမှာ ပိုပြီးတော့ ဦးစားပေးသင့်တာကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ နေ့စဉ် လူမှုစီးပွားတိုးတက်ရေး ဆိုတဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ ဦးစားပေးလမ်းညွန်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားပြီး လုပ်ရမှာပါ။ အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီ နေ့စဉ် လူမှုစီးပွား တိုးတက်ရေးဆိုတာမှာလည်း သမ္မတကြီး ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာ ဒါ မဖြစ်မနေ ပါလာမှာပါ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လုပ်ရင်းနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် လူထုရဲ့ နေ့စဉ် ဘဝ သက်သာ ချောင်ချိရေးကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပိုပြီး အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး။ ။ တစ်ဆက်တည်းပဲ မေးချင်တာက ဆရာပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ ပေါ့လေ၊ မူဝါဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းတယ်လို့ သုံးသပ်လို့ရ တယ်၊ ဆိုတော့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တွေပေါ့။ အထူးသဖြင့် ဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံကို ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ အင်မတန် မှ အားမလို အားမရဖြစ်တာပေါ့နော်။ ဒီဝန်ကြီးချုပ်တွေ အပေါ်မှာကော ပါတီအနေနဲ့ပေါလေ ဘာများ ပြောနိုင်မလဲ၊ သူတို့ကို မူဝါဒတွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြည်သူလူထု လိုလားတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အဆင်ပြေဖို့ပေါ့ ၊ ဒါမျိုးတွေကိုကော ဆရာဘာများထပ်ဖြည့်ပြောလို့ရမလဲခင်ဗျား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော် နှစ်ချက်ပြောချင်တယ်။ တစ်အချက်က လူထုဟာ ကျွန်တော်တို့ အမှန်တကယ် လုပ်နိုင်တာထက် အများကြီးကို မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကလဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရရင် အခု နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီပြီး ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများလို အပြောင်းအလဲကြီး ဖြစ်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့် တယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သိပ်ပြီးမျှော်လင့်ချက် မြင့်မားလွန်းတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ပျက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တွေ သူတို့ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်က သိပ်ပြီးညံ့ဖျင်းတယ်လို့တော့ ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှေ့ရှေ့တုန်းက ဒီတာဝန်ကို ယူသွားတဲ့လူတွေကလည်း တကယ်တော့ ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုပါတော့ တပ်မတော် အရာရှိဆိုလည်း တပ်အတွင်း စစ်ရေး အမြင်၊ လုံခြုံရေးအမြင် ရှိကောင်းရှိမယ်၊ သို့သော်စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့၊ သူတို့မှာ ချို့ယွင်းချက်တွေ အများကြီးရှိတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းကြောင်းမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကို နှစ်ပေါင်း ဆယ်စုနှစ်ချီပြီး လုပ်လာခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ အရေးအကြီးဆုံးပါ။ အဲ့ဒီတော့ ဝန်ထမ်းတွေက အရင်ခေတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခါမှာ ဥပမာ အပေးအယူ၊ ခံစားမှုလေးတွေရှိတဲ့အခါ သူတို့ဟာ လိုက်ပါတယ်။ အထက်က ညွန်ကြားတဲ့သူကို အထောက်အကူဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုစနစ်အပြောင်းအလဲမှာ သူတို့မှာလဲ ဆန္ဒအရ မလိုက်ပါချင်တာလည်း ရှိမယ်၊ စနစ်အပြောင်းအလဲကြောင့် သူတို့မှာ ခံစားနေရတဲ့ အကျိုးစီးပွား တစ်ချို့ ယုတ်လျှော့သွားတာလည်း ရှိကောင်းရှိမယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ တိတိကျကျ မလိုက်ပါနိုင်တာကို ကျွန်တော် တွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အချင်းချင်း အတွင်းမှာ ဝေဖန်ကြပါတယ်။ ဒါမှ ဒီအခက်အခဲရှိတာက ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဥပဒေအရ ဝန်ထမ်းတွေကို အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရက ဘယ်တော့မှ ဥပဒေကိုလွန်ပြီးမလုပ်ပါဘူး။ ဥပဒေလွန်မလုပ်တဲ့အခါ ဘောင်ထဲကလုပ်ရတဲ့အခါမှာ သူတို့လိုက်ပါလာဖို့ လုပ်တဲ့အခါမှာ နဲနဲအကျပ်အတည်းလေးရှိပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့က တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို သူတို့ နားလည်သဘောပေါက် လာအောင် သူတို့ရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ ပြည့်စုံပြီးတော့ ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းဘဝဖြစ်အောင်၊ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း နားလည်အောင်၊ တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေကို ပိုပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်အောင် ဒီလိုလမ်းနှစ်သွယ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖို့ သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ။